Intengiso | I-Hangzhou Zkong Networks Co, Ltd.
Iivenkile ezinkulu zentengiso ezixhotyiswe ngeelebheli zeShelf ze-Elektroniki, kunye nokudibanisa iilebheli ezikrelekrele kunye netekhnoloji ye-IoT kunye neenkqubo zazo zinokubeka izixhobo ngakumbi kwintengiso kunye nentengiso.
Ukuhamba komlingo kunje: ngemizuzwana, zonke iilebheli zihlaziywa ngedatha yamva nje evela kwi-ofisi eyintloko ngaphandle kokusilela; ngeeveki, zonke iivenkile zigcine ixesha elininzi lokusebenza kunye neendleko; kwiinyanga, zonke iimitha ezisecaleni zikhuselwe sisisombululo esitsha kunye nolwaneliseko oluphezulu lwabathengi ezishelfini.
I-ESL ivala izikhewu zemiceli mngeni kulawulo lweevenkile, kwaye yeyona nto ibalulekileyo yoThengiso olutsha. I-ESL iqala uhambo olonwabisayo lwabathengi abafuna ukubandakanyeka ngakumbi kwindawo yokuthenga kwaye baxhamle kunxibelelwano olunzulu kunye neevenkile.